तपाईं कसरी एसईओ प्रदर्शन विश्लेषण गर्नुहुन्छ? Semalt विशेषज्ञहरु बाट6सल्लाहहरु
खोज इन्जिन रहस्यमय जनावरहरू हुन्। इन्टरनेटको सबै शक्तिशाली गेटकीपरहरू, उनीहरूले यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि उनीहरूले केवल उच्च गुणस्तर र सबै भन्दा सान्दर्भिक परिणामहरू उनीहरूको प्रयोगकर्ताहरूलाई डेलिभर गर्छन्, नत्र कि तिनीहरू अन्य, उत्तम विकल्पहरूको लागि एकातिर धकेलाइनेछन्।
यस्तो गुणस्तरीय खोज नतिजा प्रदान गर्न, खोजी ईन्जिनले यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि ती खोजीको क्रममा ती एल्गोरिथ्मको प्रयोग गरिन्छ जुन नजिकै सुरक्षित राखिएको छ। जे भए पनि, यदि कुनै संगठनलाई सही सूत्र थाहा छ भने उनीहरूले यसलाई क्रमशः चढ्न शोषण गर्न सक्दछन्।
फ्लिपसाइडमा, खोज इञ्जिनहरूले वेबसाइटहरूलाई केहि स give्केत दिनुपर्दछ कि तिनीहरूलाई के राम्रो दर्जा दिन मद्दत गर्दछ, अन्यथा, सबै अन्धाको वरिपरि दौडिरहेका हुनेछन्। गुगल, याहू जस्तो सम्झौता खोज ईन्जिनको रूपमा। र बिंगले खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन (एसईओ) दिशानिर्देशहरूको एक सेट प्रस्तुत गरेको छ - गुणहरूको सूची जुन सबै शीर्ष-रैंकिंग वेबसाइटहरूले साझेदारी गर्छन्।
र यी यी गुणहरू हुन् जुन एसईओ विश्लेषणको आधार बनाउँदछन्।
किन म मेरो एसईओ प्रदर्शन विश्लेषण गर्न आवश्यक छ?
तपाईंले एक वेबसाइट बनाउनु भएको छ। तपाईंले खोज इञ्जिन अनुकूलनको आधारभूत सिद्धान्तहरू अनुसरण गर्नुभयो। तपाईंले ईथरमा तपाईंको साइट राख्नुभयो। किन तपाईं आफ्नो एसईओ प्रदर्शन विश्लेषण गर्न आवश्यक छ?
त्यहाँ दुई मुख्य कारणहरू छन्।
सबैभन्दा पहिले, ज्ञान शक्ति हो। पक्कै, तपाईंले आफ्नो वेबसाइट 'पुस्तक द्वारा' निर्माण गरेको हुन सक्छ, तर तपाइँ वास्तवमै थाहा छैन कि यसले कति राम्रो प्रदर्शन गर्दैछ जब सम्म तपाईंले वास्तवमै यसलाई परीक्षण गर्नुहुन्न। यो हुन सक्छ कि तपाईंले आफ्नो वेबसाइटलाई लगभग उत्तम रूपमा अप्टिमाइज गर्नुभयो, तर तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूले उनीहरूलाई थोरै अप्टिमाइज गर्न व्यवस्थित गरेका छन्, र तपाईंले अझै काम गर्न बाँकी छ। तपाईंको एसईओ प्रदर्शनको विश्लेषण गरेर तपाईं सुधारको मुख्य क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ, र तपाईंको प्रतिस्पर्धीलाई क्रमबद्धमा अघि सार्न सक्नुहुन्छ।
दोस्रो, SEO लगातार परिवर्तनको स्थितिमा छ। निरन्तर तिनीहरूको परिणामको गुणवत्ता सुधार गर्न र वेबसाइटहरूको एक कदम अगाडी रहन, गुगल, याहू! र बिंगले लगातार तिनीहरूको एल्गोरिदमहरू चिमटाउँछ। यसको मतलब यो हो कि गत हप्ता तपाईलाई र्याs्की of्गको शीर्षमा पु got्याउने कुरा यस हप्ता त्यहाँ नहुन सक्छ। यदि तपाईं आजका १०० वा १ years बर्ष भन्दा राम्रो अभ्यासहरूको तुलनामा SEO को सर्वश्रेष्ठ अभ्यासहरू तुलना गर्नुहुन्छ भने परिवर्तन नाटकीय छ। प्रत्येक गुगल एल्गोरिथ्म अपडेटको सूचीले यो पढाइको लागि आकर्षक बनाउँछ।
तपाईंको एसईओ प्रदर्शनको विश्लेषणले तपाईंको वेबसाइटलाई सुधार गर्दछ र तपाईंलाई परिवर्तनमा प्रतिक्रिया दिन मद्दत गर्दछ। यो रैंकिंगको शीर्षमा पुग्न र त्यहाँ रहन चाहने जोसुकाहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसोभए तपाईं कसरी एसईओ विश्लेषण गर्नुहुन्छ?
SEO कुञ्जी तरिकाहरू तपाइँको एसईओ प्रदर्शन को विश्लेषण गर्न
तपाईंको प्रदर्शनको अर्थपूर्ण विश्लेषण छ प्रमुख सिद्धान्तहरूमा आधारित छ जुन एसईओको ईतिहासको माध्यमबाट तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहन्छ — सुविधाहरू Semalt एनालिटिक्सको मुख्य अंश। हामी प्रत्येक मा एक नजर दिनुहोस्।
जब प्रयोगकर्ताले गुगलमा शब्द वा वाक्यांश टाइप गर्दछ, यो खोजी पछाडि ड्राइभि force बल हुन्छ। अवश्य, गुगलले प्रयोगकर्ताको स्थान, वा व्यक्तिको प्रोफाइल जुन उनीहरूले धेरै बर्षमा निर्माण गरेका छन्, विश्लेषण गर्न सक्छन्, तर यस जानकारीले केवल खोजीमा नुन र कालो मिर्च थप गर्दछ। कीवर्ड मुख्य डिश हो।
जब गुगलले यस कुञ्जी शब्दहरूको खोजीमा वर्ल्ड वाइड वेबमा आफ्नो जाल लगाउँछ, के तपाईंको वेबसाइट समातिनेछ? के तपाइँ सबै प्रासंगिक कुञ्जीशब्दहरू जान्नुहुन्छ जुन तपाइँको वेबसाइटले तपाइँले बेच्ने उत्पादनहरू र उद्योगमा रहनुभएको फिचरको बारेमा फिचर गर्नुपर्दछ? यदि तपाईं लन्डनमा एक पारिवारिक कानून फर्म हुनुहुन्छ, के तपाईं 'पारिवारिक कानून लन्डन' को परिणामको रूपमा सुविधा दिनुहुन्छ? यदि तपाईं ब्रूक्लिनमा पिज्जा पसल हुनुहुन्छ भने के तपाईं 'पिज्जा ब्रुकलिन' को परिणामको रूपमा सुविधा दिनुहुन्छ? यी अवधारणा प्रदर्शन गर्न धेरै आधारभूत उदाहरण हो; सही कुञ्जी विश्लेषण र अप्टिमाइजेसन गहिराईमा धेरै छ।
कुञ्जीशब्द विश्लेषणले तपाईको ध्यान केन्द्रित गर्ने र तपाइँको वेबसाइटमा उनीहरू कहाँ राख्नुपर्दछ भन्ने कुञ्जी शव्दहरू पहिचान गर्दछ। हेडिंगहरू र मेटाडेटा जस्ता उच्च दृश्यता क्षेत्रहरूमा मुख्य कुञ्जी शब्दहरू राख्नु भनेको निश्चित गर्नुहोस् कि खोजी ईन्जिनहरूले तिनीहरूलाई देख्दछन्।
इन्टरनेट खोजीको शुरुका दिनहरूमा, गुगलले उनीहरूको नतीजाहरूको गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्ने उपाय खोज्दैथियो। तिनीहरूले बुझ्दछन् कि किवर्डहरूमा पूर्ण भरोसा राख्दै वेबसाइटहरू 'कीवर्ड स्टफिंग ' देख्दछन् - किवर्डहरू जहाँ उनीहरू जहाँ आफ्नो साइटमा क्रमबद्ध गर्न सकीन्छन् रिडि seeको शीर्षमा चढ्न। त्यसोभए तिनीहरू एउटा चलाख समाधानको साथ आए: तिनीहरूले लि examined्कहरू जाँच गरे।
उनीहरूको सोच्ने तरिका सरल थियो: बाह्य स्रोतबाट वेबसाइटमा अधिक लि website्क, वेबसाइट उच्च स्तरको। यो नै कारण हो कि तपाईले लगातार विकिपेडियालाई खोजीको शीर्षमा देख्नुहुन्छ - ती विशेष रूपमा कुञ्जी शब्द अप्टिमाइजेसनको ख्याल राख्दैनन्, तर तर्कका रूपमा इन्टरनेटको सबैभन्दा विश्वसनीय स्रोतको जानकारीका रूपमा अन्य वेबसाइटहरू विकिपेडियामा जहिले पनि लिंक गर्दछन, यसले साइटको वैधता बढाउँदछ। । यदि तपाईंले पहिल्यै याद गर्नुभएन भने, मैले माथिको अनुच्छेदमा विकिपेडिया लेखमा लिंक गरें।
लिंक निर्माण एसईओ मा एक मुख्य भूमिका खेल्छ। तपाईको वेबसाइटको लि Analy्कहरूको विश्लेषण, दुबै आन्तरिक र बाह्य, खोज ईन्जिनहरू द्वारा तपाइँको वेबसाइट कत्तिको आदरयुक्त छ भनेर बुझ्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ। सामग्रीले प्राय तपाइँको लि performance्क प्रदर्शन सुधार गर्न प्रमुख भूमिका खेल्छ, किनकि तपाइँसँग अन्य वेबसाईटहरूलाई लिंक गर्न तपाईंले एक वास्तविक कारण दिनुपर्दछ।
तपाईंको वेबसाइट कत्तिको राम्रोसँग निर्माण गरिएको छ? खोजी ईन्जिनहरूले 'वेब क्रोलरहरू' पठाउँछन् जसले व्यवस्थित रूपमा इन्टरनेट ब्राउज गर्दछ र यसको सामग्रीहरू अनुक्रमणिका गर्दछ। सहजताको साथ तिनीहरू आवश्यक जानकारी जम्मा गर्छन् SEO मा एक कारक हो।
यसलाई किनमेल यात्राको रूपमा सोच्नुहोस्। जस्तै वेब क्रलर लागि Googlebot , राम्ररी निर्मित वेबसाइट राम्रो टन्न भरेर छ, स्पष्ट लेबल र लेआउट बुझ्न सजिलो मा राखिएको एक नयाँ सुपरमार्केट-सबै ब्राउजिङ जस्तै हुनेछ। नराम्रो रूपमा निर्मित वेबसाइट ग्यारेज बिक्रीको किनमेल जस्तै हो - कुनै संगठन, कुनै लेबल, र अनौठो वस्तुहरू कुनै पनि ठाउँमा जताततै फ्याँकिन्छ।
वेबसाइट विश्लेषण तपाइँको वेबसाइट को बैकएन्ड मा केन्द्रित छ। यसले तपाइँलाई बुझ्न मद्दत पुर्‍याउँछ कि वेब क्रोलरले तपाइँको साइटलाई यसको आवश्यक जानकारी फेला पार्न कसरी नेभिगेट गर्न सक्छ। यसले तपाईंलाई सुधारको सूचि प्रदान गर्दछ यस पूर्वाधार सुधार गर्न तपाईंले गर्न सक्नुहुने।
तपाईको ब्रान्ड कति प्रख्यात, लोकप्रिय र विश्वासिलो छ, केवल गुगलको दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, तर सम्भावित ग्राहकहरूको नजरमा पनि?
व्यापक ब्रान्ड अनुगमनले तपाइँको अनलाइन उपस्थितिको अधिक समग्र दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ - यो केवल तपाइँको वेबसाइटमा मात्र देखिदैन, तर गुगल, फेसबुक, ट्रस्टपिलट र ग्लासडोर जस्ता समीक्षा समुहकर्ताहरूमा हेर्नुहोस् र तपाइँको ब्रान्डको समग्र अनलाइन प्रदर्शनको विश्लेषण गर्दछ। यसले तपाइँको ब्राण्डलाई बाहिरबाट कसरी हेरिएको छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ र कसरी तपाइँ त्यो धारणा बढाउन सक्छ भनेर देखाउँदछ। यी अन्तर्दृष्टिले तपाईंलाई एक प्रभावकारी सहयोग नीति विकास गर्न मद्दत गर्दछ।
भन्नुहोस् कि तपाइँ एक परीक्षण मा एक 70% अंक प्राप्त। पक्का, यो एक पास छ, तर परिणामको मतलब धेरै हुँदैन जबसम्म तपाईलाई थाहा हुँदैन सबैले कसरी राम्रो काम गर्छन्। त्यस्तै, तपाईलाई वास्तवमै थाहा छैन तपाईको एसईओ विश्लेषणले के बुझाउँछ जब सम्म तपाई आफैंलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरु संग तुलना गर्नुहुन्न।
प्रतिस्पर्धी विश्लेषण मा माथि जस्तै समान प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ कसरी तपाइँको डिजिटल पदचिह्न मा तपाइँको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी को भन्दा माथि उपाय। यसले हेर्छ कि यी कम्पनीहरूले हाल कहाँ रैंकिंग गरिरहेका छन्, र उनीहरू त्यहाँ पुग्न के गर्दै छन्।
र अब मुख्य घटनामा। एकचोटि तपाईंले यी सबै विश्लेषणहरू एकसाथ एकत्र गर्नुभयो, यो तपाईंको ज्ञानलाई कार्यमा पार्ने समय हो। एसईओको अन्तिम लक्ष्य भनेको तपाइँको वेबसाइटलाई सम्बन्धित खोजशब्दहरूको लागि खोजी ईन्जिनहरूमा उच्च श्रेणीकरण प्राप्त गर्नु हो, त्यसैले एक पटक तपाइँले योगदान पुर्‍याउने प्रत्येक कारकको विश्लेषण गर्नुभएपछि, यो तपाइँको प्रयासहरूको परिणामहरूको विश्लेषण गर्ने समय हो।
राम्रो किवर्ड रैंकिंग विश्लेषण नियमित हुनेछ (आदर्श दैनिक प्रदर्शन हुँदैछ) र विस्तृत। यसले बहु खोजी ईन्जिनहरूमा तपाईंको स्थिति ट्र्याक गर्दछ, र तपाईंलाई अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ जुन तपाईं आफ्नो रैंकिंग सुधार गर्न आवश्यक छ। यो समयको साथसाथै तपाईंलाई क्रमशः माथि धकेल्दो मूल्यवान् हुनेछ।
तपाइँको SEO प्रदर्शन जाँच गर्न Semalt एनालिटिक्स प्रयोग गर्दै
Semalt एनालिटिक्स माथिको बक्स को हरेक एक टिक छ । एक पेशेवर-ग्रेड वेबमास्टर एनालिटिक्स उपकरण, यो तपाइँको तपाइँको वर्तमान एसईओ स्थिति को एक स्पष्ट दृश्य प्रदान गर्न र अपराजेय अन्तर्दृष्टि उत्पन्न गर्न डिजाइन गरिएको छ जुन तपाइँलाई सब भन्दा सान्दर्भिक कुञ्जी शव्दहरूको लागि खोज रैंकिंगमा चढाई दिनेछ।
Semalt एनालिटिक्स द्वारा काम गर्दछ:
वेबसाइट डाटा जमा गर्दै
तपाइँ र तपाइँका प्रतियोगीहरूको SEO स्थिति सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट उत्पन्न गर्दै
कुञ्जी शब्दहरूको सूची प्रदान गर्दै जुन तपाईंको साइटलाई अनुकूलित गर्दछ र ट्राफिक बढाउँदछ
तपाइँको एसईओ प्रयासहरु लाई five सम्ममा बिभिन्न खोज इञ्जिनहरुलाई समर्थन गर्दै
वास्तविक समयमा रैंकिंगको विश्लेषण र दैनिक एसईओ रिपोर्ट वितरित गर्दै
सम्पूर्ण प्रक्रियाको पर्यवेक्षण गर्न एक व्यक्तिगत विश्लेषण प्रबन्धक तोकिएउटाो
Semalt एनालिटिक्सले तपाईंलाई जानकारी दिन्छ। के तपाईं ती अन्तरदृष्टि संग के तपाईं मा निर्भर गर्दछ। तपाईं तिनीहरूमा आफैं कार्य गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईं Semalt SEO विशेषज्ञसँग परामर्श लिन सक्नुहुन्छ, जसले तपाईंलाई यो नयाँफाउन्ड ज्ञानलाई कार्यमा राखेर मार्गदर्शन गर्दछ।
खोज इञ्जिन अनुकूलन एक निरन्तर लडाई हो। गोलपोस्टहरू निरन्तर चल्दैछन्, र प्रतिस्पर्धीहरू सँधै तपाईंलाई भेट्न खोज्दैछन्। तर खेलका नियमहरू बुझेर, र स्मार्ट उपकरणको प्रयोग गरेर जसले तपाईंलाई सफलताको उत्तम अवसर प्रदान गर्दछ, तपाईं विजयी लडाईबाट बाहिर आउने सम्भावना धेरै नै हुनुहुन्छ।
त्यसोभए किन पर्खनुभयो? यो Semalt एनालिटिक्सको साथ सुरू गर्न स्वतन्त्र छ— तपाईं आफ्नो वेबसाईट प्रो प्रो विश्लेषणमा अहिले एक प्रतिशत तिर्नु बिना थप्न सक्नुहुन्छ , र तपाईंको व्यवसायले एसईओ सफलता कसरी हासिल गर्न सक्दछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।